SECES ANTANANARIVO : Hanao tomban’ezaky ny fitokonana efa natao ireo mpikambana
Mbola tsy tapitra ny ady ho an’ireo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra na ny seces ho an’ny sampana Antananarivo. 9 janvier 2018
Amin’ny ankapobeny mbola tsy nivaly araka izay notadiaviny ny fitakiana nataon’ireo mpampianatra hatramin’izao. Raha tsiahivina, nanomboka ny volana novambra lasa iny no efa niroso tamin’ny fitokonana izy ireo. Efa nisy hatrany ny fihaonana tamin’ireo tompon’andraiki-panjakana miahy ny fampianarana ambony tamin’izany saingy nandamoka hatrany. Ny alakamisy ho avy izao hiroso amin’ny fivoriam-be indray ireo mpikambana ao amin’ny seces.
Hiompana amin’ny fanaovana jery todika ny akon’ny fitokonana izay efa natombok’izy ireo tamin’ny 20 desambra no hiompanan’ny lahadinika amin’izany. Handrasana ao anatin’io fivoriam-be io ihany koa izay mety ho fanapahan-kevitra horaisin’ny sendikan’ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra sampana Antananarivo amin’ny tohin’ny hetsika rehetra izay hataony. Ankoatry ny fitakiana ny tambin- karamam-pikarohana ho an’ireo mpampianatra efa misotro ronono nefa mbola manohy ny asa fikarohana, anisany takian’izy ireo ihany koa ny hitazomana ny ora fanampiny ho 150 ora hiasan’ireo mpikambana ao anatin’ny seces.
Nambaran’ny filohan’ny seces sampana Antananarivo fa tsy nifanaraka tamin’izany ny vokatr’ireo fihaonana tamin’ireo tompon’andraikitra. “Ny novalian’ny minisitera mpiahy dia ny zavatra tsy notakianay. Isaorana be dia be ny minisiteran’ny vola sy ny fitantanam-bola, isaorana ihany koa ny antenimieram-pirenena indrindra moa ny minisitera mpiahy izay nanolotra fa tafiditra tao anatin’ny tetibolam-panjakana ilay tambin-karama anankiroa izay tsy takianay akory fa efa azonay”, hoy ny fanazavana nomen’ny filohan’ny seces sampana Antananarivo.